राजावादीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको कडा चेतावनी (भिडियो सहित) | Kendrabindu Nepal Online News
राजावादीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको कडा चेतावनी (भिडियो सहित)
२ भाद्र २०७६, सोमबार ०८:११
प्रधानमन्त्री केपी शर्माले राजसंस्था उल्टाउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजसंस्थाको वकालत गर्नेहरुको सडकमा चलखेल बढेको भन्दै ज्यूँदै फालेको राजसंस्था उल्टाउने सपना नदेख्न चेतावनी दिनुभएको हो । प्रतिगमनकारीहरुले सरकार अधिनायवादतर्फ गयो भन्दै जनतामा अविश्वास, निरासा र भ्रम फैलाउने काम गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले लोकतन्त्र रक्षाका लागि सरकार मैदान उत्रने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “ती शक्तिहरु जीउदै हुदा तीनलाई हामीले ठेगान लगाएका हौं । अहिले चिहानमा गएर हड्डी फुकेर त्यो संस्था फर्काउछु भन्ने कुराको पनि परिकल्पना गरेर उफ्रेको देखिन्छ । यो बेमौसमी बाजा नबजाए हुन्थ्यो । ” उहाँले राजसंस्थावादीहरुलाई नहौसिन पनि चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “अहिलेको सरकारको उदारता र सयंमतालाई हेरेर केही तत्वहरु बढ्तै हौसिएको देखिन्छ । सरकारको आलोचनाको नाममा प्रणाली उल्टाउँछु भन्ने , प्रतिगमन गर्छु भन्ने , संविधान अस्वीकार गर्छु भन्ने कुराहरु अहिलेको सरकारलाई मान्य हुन सक्दैन । म खुलस्त भन्न चाहन्छु संविधान लोकतन्त्र , गणतन्त्र, संघीयता र जनताको शासन विरोधी क्रियाकलापहरु सरकारको उदारताबाट त्यस्ता क्रियाकलाप संचालन गर्ने तत्वहरु नहौसिए हुन्छ । ” केही प्रतिगामी तत्वहरु सडकमा आए भन्दैमा सरकार भाग्छ भन्ने दिवा सपना नदेख्न पनि उहाँले सबैलाई सचेत गराउनुभयो । ठुला ठुला चुनौतिको सामाना गरेर आएको पृष्टभूमि वर्तमान सरकारको रहेको भन्दै उहाँले राजसंस्था उल्टाउँछु भनेर सडकमा नआउन चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “मैले एक जनाले भनेको सुने । प्रधानमन्त्री लगलग लगलग कामेका छन् । अब जाने भो भनेर । पद नगएको मैले दुनियाँमा कोही देखेको छैन । सबैको पद कुनै न कुनै दिन जान्छ । आगामी निर्वाचनपछि मलाई पनि बस्न मन छैन । त्यसकारण निर्वाचन सम्म धैर्य गर्न म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।”
उहाँले सरकारको लोकतान्त्रिक अभ्यास र निष्ठामाथि अनावश्यक भ्रम फैलाउने प्रयास भएको टिप्पणी गर्नुभयो । लोकतान्त्रिक विधिबाट जनताको अभिमत र विश्वासबाट वर्तमान सरकार बनेकाले जनताको हित विपरित कुनै पनि त्रुटी नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले जनताको निरासा र तात्कालिन भल छोपेर सरकार गठन नभएको तर्फ पनि सचेत गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “जनताको अभिमतबाट वर्तमान सरकार बनेको छ । यो सरकार अचानक एउटा हुईममा जनताको निरासामाथि टेकेर बनेको सरकार होइन । तात्कालिन सेन्टिमेण्टको एउटा भल छोपेर बनेको सरकार होइन । अरुले ल्याएर दिएको लोकतन्त्रमा होइन । लोकतन्त्र ल्याउन लडेको हो । कोही भन्दा कम त्याग तपस्या र बलिदानी गरेर यस पार्टीले त्यो समर्थन प्राप्त गरेको होइन । यस पार्टीले कुनै नीतिगत वा कुनै त्रुटी र गलत कामबाट जनताको आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्था श्रृजना गरेको छैन । अधिनायकवाद तर्फ गयो भनेर जनतामा भ्रम फैलाउने प्रयास नगरे हुन्छ । ” प्रधानमन्त्री ओलीले एक साता भित्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनुभयो । भिडियोमा :
कडा चेतावनी, प्रधानमन्त्रीको, भिडियो सहित, राजावादी
Prevरोजगारी खोज्दै नेपाल आउने विदेशी बढे
रवि लामिछानेको समर्थकलाई भेडा भनेको होइन : करिष्मा मानन्धर (भिडियो सहित)Next
मेरो डान्स कपको रियालिटी शो अमेरिकामा हुने (भिडियो सहित)
वर्ष २०१९ मा नेपालमा भएका चर्चित घटनाहरु (भिडियो सहित)
बालबालिकाको प्रश्न : प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने सोच्नुभएको थियो ? (भिडियो सहित)
वर्ष २०१९ मा डेब्यु गरेका कलाकारहरु (भिडियो सहित)
२०१९ मा नेपालले गुमाएका १० कलाकार (भिडियोसहित)
वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अनुकूल परिस्थिति हो सत्ता बहिर्गमनः डा. बाबुराम भट्टराई (भिडियो सहित)